पाँचथर हत्याकाण्ड : गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ' रगतको खोलै बगे जस्तै थियो ' ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०७, २०७६१२:५३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिका वडा नं. ३ आरुबोटेमा सोमबार राती दुई परिवारका नौ जनाको विभत्स हत्या गरिएको छ । हत्याबारे एक पछि अर्को गर्दै निकै रहश्यहरु खुल्दै आएका छन् ।
घटनास्थलबाट भागेर आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएकी १२ बर्षीय सिता खुजुमले हत्याराको समूह कपडाले आफ्ना अनुहार ढाँकेर आएका बताएकी छिन् । त्यस्तै मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की वडाध्यक्ष उर्मिला राईले घटनाको ४ दिन अघि मात्र सोही घरमा अर्को रहश्यमय घटना घटेको समेत खुलाएकी छिन् ।
उनका अनुसार ४ दिन अघि प्रशिक्षण दिनका लागि साना घरेलु विकास कार्यालयबाट आएका टोलीलाई खुवाउने खानामा प्रयोग भएको नुनमा सिसाको धुलो मिसाइएको भेटिएको थियो ।
त्यसैगरी यस घटनाबारे मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले घटनाबारे आफुले मंगलबार बिहान ६ बजेर ११ मिनेटमा थाहा पाएको र थाहा पाए लगत्तै नजिकैको प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई खबर गरी इन्सपेक्टरसहित आफुहरु घटना स्थलमा पुगेको बताएका छन् ।
घटनास्थलमा पुग्दा पहिला ससुरा बमबहादुर फियाकको शव देखिएको बताउँदै उनि भन्छन्, ‘ बमबहादुर घर बाहिर सिखुवामा सुतेका रहेछन् । उनको अनुहारभरी धारिलो हतियार प्रहार गरेको देखियो । अनुहार नचिन्ने गरी हानिएको छ । छ्याक–छ्याक पारेको देखियो । यताउता रगत लत्पतिएको देखियो । ‘
उनले भने, ‘ बमबहादुरको घरमा ४ वटा शव थिए । जसमा एउटा बाहिर र ३ वटा भित्र । हेर्नै नसकिने अवस्था थियो । ‘
त्यसपछी आफुहरु ज्वाइँ धनराज शेर्माको घरमा जाँदा झनै विभत्स दृश्य देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘ ज्वाइँ धनराज शेर्माको घरमा जाँदा झनै विभत्स दृश्य देखियो । भित्र जान सकिएन । बाहिरैबाट हेर्दा २ बालबालिका खाटमा रगताम्य भएर लडिरहेको देखियो । ३ वटा शव खप्टिएको देखियो । जताततै रगतै रगत थियो । रगतको ‘खोलै’ बगे जस्तै थियो । ‘
प्लेनमा चढे पछि पाइन्छ ल्यापटप !
म बाट गल्ति भयो भन्दै सुहाना थापाले मागिन माफी भन्छिन यस्ता गल्ती अबका दिनमा दोहोर्याउने छैन
यात्रुको चाप नभएपछि दसैंलाई अग्रिम टिकट खुलाइएन
लोडसेडिङ ब्युँताउने खेल सुरु भयो उज्यालो नेपाल अभियानमा डिस्टर्ब भैरहेको छ : कुलमान घिसिङ !